एनआरएनएको निर्वाचन पद्धति – Chitwan Post
एनआरएनएको निर्वाचन पद्धति
यतिखेर देशविदेशमा एनआरएनएको चुनावी सरगर्मी बढिराखेको छ । अक्टोवर १५ देखि १७ सम्म काठमाडौँमा एनआरएनएको विश्व सम्मेलन भैरहेको छ । यो सम्मेलनले २ वर्षका लागि नयाँ नेतृत्वको छनोट पनि गर्नेछ । एनआरएनले हाल विश्वका ८१ वटा देशहरुमा विभिन्न इकाइहरुको निर्वाचन पनि सम्पन्न गरिसकेको छ भने काठमाडौँमा सम्पन्न हुने विश्व सम्मेलनमा हाल एनआरएनए व्यस्त भैरहेको छ ।
प्रविधिको यो जमानामा पनि एनआरएनएको चुनावी पद्धति ठीक नभएको भन्दै कतिपय एनआरएनएकै सदस्यहरुले सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टिहरु पोख्न थालेका छन् । लाखौँलाख एनआरएनए सदस्यहरु भएको एनआरएनएको केन्द्रीय निर्वाचनमा करिब १५ सयले मात्र सहभागिता जनाए पनि हुने प्रावधान धेरै एनआरएनए सदस्यहरुलाई मन परेको छैन । अबको एनआरएनएले यो सबैले चुनेको नेतृत्व हो भनेर स्वामित्व ग्रहण गराउन सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म सदस्यहरुले स्वामित्व ग्रहण गर्न सकेका छैनन् । एनआरएनएको यस्तै निर्वाचन विधिका बारेमा आइसीसीले ध्यान दिनु जरूरी देखिन्छ । समयअनुसार हामी परिवर्तन हुने कि नहुने ? प्रविधिको यो युगमा हामीले प्रविधिको भरपूर उपयोग गर्नैपर्दछ भन्ने मेरो सुझाव हो । बरू, त्यसका लागि मेरो तर्फबाट सकेको सहयोग गर्न म हमेसा तयार छु ।
हामीले गर्दै आएको केन्द्रीय एनआरएनएको नेतृत्व छनोट प्रक्रिया अत्यन्तै भड्किलो, खर्चिलो बन्दै गएको छ । विज्ञान र प्रविधिको यो युगमा पनि प्रत्येक सदस्यले घरमै बसी–बसी एक क्लिकको भरमा आफ्नो उमेदवार छनोट गर्न नपाउनु बिडम्वनाको कुरा हो । सम्बन्धित देश र क्षेत्रका प्रतिनिधिले नेपालमै गएर भोट हाल्ने व्यवस्था अवैज्ञानिक र नमिल्दो छ । विश्वभर फैलिएर रहेका नेपाली नागरिक भोट हाल्नकै लागि नेपाल जानसक्ने सम्भावना हुँदैन । प्रतिनिधिलाई भोट हाल्न जानुको साटो बरू अनलाइन भोटिङ सिस्टममार्फत वैज्ञानिक विधि अपनाउनुपर्छ । रिजल्ट पनि तुरून्तै आउने र कसले कति मत पायो सहजै थाहा पनि हुनेछ । जसको उदाहरणस्वरुप एनआरएनए डेनमार्कको निर्वाचनमा प्रत्येक सदस्यले अनलाइन भोटिङ सिस्टमको माध्यमबाट भोट दिएर यसको सफल प्रयोग गरिसकेको छ ।
द्वन्द्वको घाउसँग जनयुद्ध दिवसको अर्थ !
एनआरएनएसँग भएको मिस सिस्टममार्फत अनलाइन फर्म भर्न सकिएजस्तै अनलाइन भोटिङ पनि सम्बन्धित देशबाट सजिलै गर्न सकिन्छ । यो विधि अस्ट्रेलियामा पनि सफल प्रयोग भइसकेको छ । यसो गर्न सकियो भने अरु २ लाखजति सदस्यहरु थप हुने पनि पक्का छ । गैरआवासीय नेपालीहरुको बढी सहभागिता रह्यो भने मातृभूमिका लागि अझ बढी उदाहरणीय कार्य गर्न सकिन्छ । विदेशिएका सबै नेपाली नागरिकलाई एकसाथ एकैदिन सम्बन्धित देशबाट नै मतदान गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था आजको आवश्यकता हो । त्यसैले, एनआरएनको अबको नेतृत्वले अबचाहिँ जरूर यसबारेमा सोच्नैपर्छ ।
प्रविधिको जमानामा परम्परावादी हुनुको कुनै तात्पर्य देखिँदैन । समयअनुसारको निर्वाचन विधि गर्न सके र बढीभन्दा बढी सहभागिता रह्यो भनेमात्र योग्य व्यक्ति चुन्न सम्भव हुनेछ । जुन उद्देश्यका लागि संस्था स्थापना गरिएको छ त्यो उद्देश्यको परिपूर्ति गर्नका लागि सहज हुन्छ । यो समावेशी विधिबाट गर्दा दसौँ लाख सदस्यहरुले छनोट गरेका व्यक्ति नेतृत्वमा आउँछ । खर्च जोगिन्छ र नेतृत्व चुन्ने फोहोरी खेलबाट बच्न सकिन्छ । यो कुरा एनआरएनको हकमा मात्र होइन कि नेपालको सरकारले पनि विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली नागरिकमाझ अनलाइन भोटिङको व्यवस्था गरेर आफ्ना नागरिकलाई मतदान गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्नुहुँदैन । संसारभरि प्रविधिको प्रयोग गरी अनलाइन भोटिङ प्रविधिको विकास गर्नमा कतिपय व्यक्ति लागिपरेको हुँदा एनआरएनमात्रै नभएर नेपाल सरकारले पनि यस्ता खाले प्रविधिलाई आत्मसात् गर्नैपर्छ ।